Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Matte Black jiido Down Jikada qasabad
2020 / 10 / 27 QoondayntaTilmaamaha qasabada 851 0
Dad badan maalmahan markay isku dayayaan inay buuxiyaan guryahooda cusub waxay bilaabaan inay raadiyaan waxyaabo yaab leh oo xiiso leh. Laakiin markay tahay jikada dadku waxay rabaan wax casri ah oo cusub, wax noolaan kara meesha oo dhan oo aragtidaas rajada leh ku soo kordhin kara dhaqanka. Ka hadalka jikada ayaa lagama maarmaan u ah fikradda lahaanshaha a qasabada madow jikada ayaa ka dhex ruxeysa gobollo badan oo adduunka ah.
Dadku si kadis ah wax ma uga haystaan ​​birta birta ah? Maya, gabi ahaanba maahan laakiin isbeddelka sida aan ognahay inuu si isdaba joog ah isu beddelayo aadna u dhaqso badan yahay. Shakhsiyadda firfircoon ee jikadaada ayaa lagu soo barbaarin karaa iyadoo la adeegsanayo midabbada lahjadda madow iyo maxaa ka mugdi badan qasabadda midabka matoorka madow? Taasi waa sababta ay dadku u jecel yihiin fikradda ah inay mid ku yeeshaan jikadooda. Haddii ay kugu adkaatay inaad dheefshiido markaa soo socdaa waa dhowr sababood oo ay tahay inaad aqriso ugu yaraan hal jeer ka hor intaadan ku boodin gabagabada deg-degga ah;
1. Iftiiminta xargaha dhuxusha
Haddii aad ku haysatid xargaha dhuxusha miiska dushiisa intii aad isticmaali lahayd qasabada midabkeedu caadiga yahay ama birta-birta ah aan wax caddaalad ah ku samayn doonin iyaga. Kaliya muuqaalkoodu wuu sii yaraanayaa laakiin fursadaha ayaa ah in dad badani aysan fahmi karin farqiga u ah inay jiraan ama aysan jirin wax dhuxul dhuxul ah gabi ahaanba. Laakiin qasabadda jikada madow kaliya ma ahan xargaha la iftiiminayo laakiin waxay sidoo kale ku dari doontaa soo jiidashada maqan.
2. Waxqabadka labada shaqo
Qaar badan oo ka mid ah qasabadahan madbakha madow waxay ku yimaadaan laba awood shaqo oo ay ugu adeegsanayaan buufis iyo inay si fiican u mayriyaan maacuunta nooc kasta ha ahaadeene. Wareegtada 360-degree ah ayaa u oggolaan doonta nadiifin kooban iyo adeegsiga wejiga si loogu dhaqo luqluqashada ama nadiifinta miisaska dusha sare iyo meelaha kale ee la xiriira.
3. Abuuritaanka barta ujeedada
Mid ka mid ah sababaha badan ee loo helo qasabadda jikada waa in la abuuro meel muhiim u ah jikada taas oo macnaheedu yahay inay abuuri karto dareen hufan oo quruxsan oo qurux badan oo ka jira jikadaada. Taasi waxaa loo isticmaali karaa in lagu waafajiyo qurxinta kale ee quruxda badan ee jikadaada ka sameysan sida doobiyada cad, nalalka casriga ah, iyo kuwo kaloo badan. Qeybta ugu hooseysa ayaa ah inaad la imaan karto qodob kasta oo macquul ah oo leh qasabada jikada madow ee gurigaaga.
4. Kor u qaad dareenkaaga habka farsamada
Muddo intee le'eg ayaad ku sii xayiranaan doontaa waagii hore? Muddo intee le'eg rakibidda naqshad cusub oo curyaan ah isla qaabkii hore ee ahama-birta ayaa kugu filnaan doona? Taasi waa sababta si aad ugu dhajiso dhadhankaaga wax xiiso leh iyo wax si dijitaal ah u soo qaadanaya xawaaraha waxaa lagama maarmaan ah inaad u tagto qasabadda madow ee jikada, waxay noqon kartaa oo kaliya waxa kaliya ee kaa maqnaa intii aad qorsheyneysay gudaha jikadaada.
Kuwani waxay ahaayeen sababaha aad u tarjumeyso sababta qasabadda madow ee jikadaadu u tahay wax waajib ah, ha ku dagin waxyaabo isku mid ah oo jajaban, oo sidaas ula soco wixii cusub oo casri ah isla markaasna faa'iido leh adeegsigaaga
Hore:: Xullo qasabad biyo-badbaadin ah oo shaqooyin badan qabata oo la jaanqaadaysa heerarka nolosha casriga ah Next: Halkeen Ka Heli Karaa Tuubada Jikada Ugu Fiican?